ADSL လိုင်း ဘာလို့ ပျက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ADSL လိုင်း ဘာလို့ ပျက်
ADSL လိုင်း ဘာလို့ ပျက်
Posted by ဆူး on Oct 19, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 21 comments
ADSL လိုင်း ဘာလို့ ပျက် ဆူး စိတ်ကူး
တလောက အင်တာနက် ပျက်လွန်းလို့ စိတ်ပျက်စရာ အလွန်ကောင်းလို့ စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာ လ နဲ့ ချီပြီး ကြာခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်တာ မနှစ်ကနဲ့ မတူအောင် ကို ပြသနာ ရှာထားသူ ရှိနေလို့ပဲ ပြောရမလားပဲ..
ဟူးးး. တွေးရင်းနဲ့တောင် စိတ်ကုန်တယ်။
ဒီလိုပါ.. ဆိုင်နဲ့ အိမ်နဲ့ နီးတော့ ဆိုင်မှာ ဖုန်းမရှိတော့ အိမ်က ဖုန်းကို သုံးချင်တယ်။ လိုင်းသမားကို တရားဝင် ပြောင်းဖို့ မေးတော့ ခက်ခဲတယ် သူလုပ်ပေးမယ် တလုံးကို ၁နှစ် ၁သိန်းပေးပါ ဆိုပြီး ညှိနိုင်းတယ်။ အိမ်မှာကော ဆိုင်မှာကော ၂ခုလုံး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးမှာ မို့ မပူနဲ့.. ဖုန်းပျက်ရင် သူ့ကိုသာ ပြောလိုက် ရုံးကို ပြောလည်း သူပဲ ပြင်ပေးရတာမို့ သူ လုပ်ပေးထားတဲ့ ဖုန်းတော့ ဦးစားပေး ပြင်ပေးမယ် ဆိုလာပြန်တော့.. ဘယ်လို တွေးတွေး ကောင်းတော့ ကောင်းသားပဲလို့.. စိတ်ကူး ရသွားပါတယ်။
အိမ်ကော ဆိုင်ကော ပိုင်ရှင်က တူတူပဲ ဆိုတော့ တစုံတခုပြသနာ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် သူဖြုတ်ပေးလိုက်ယုံပဲ ပြသနာ မရှိဘူး အဆင်ပြေတယ် သေချာ ရှင်းပြရှာတယ်.. ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ဒါလည်း မဆိုးပါဘူး
၂၀၀၉ ကတည်းက ဆိုင် နဲ့ အိမ်နဲ့ ဖုန်း ကို နေရာ ရွှေ့ချိတ်ပြီး ယူထားတယ်။ နှစ်စဉ် နှစ်ဆန်း ရက်ဆိုရင် တနှစ်စာ လာလာ ထုတ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေနေတော့ ပြသနာ မရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်း စီ ၁နှစ်စာ ကြိုထုတ်တဲ့ အပြင် ၂နှစ်စာပါ ကြိုထုတ်သွားပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဖုန်းလိုင်းက သိပ်အဆင်ပြေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၂ အတွက် ပိုက်ဆံ ကျသင့်ငွေ ကို ၂၀၁၁ မကုန်ခင်မှာကတည်းက ကြိုထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မိုးကရွာ ဖုန်းက ပြတ်.. ဖုန်းလိုင်းက စပါယ်ရှယ်ကောင်းလာပါတော့လဲ… အင်တာနက် က လုံးဝ သုံးမရပါဘူး။
၂၀၁၂ မ၀င်ခင် ၂၀၁၁ ကုန်ခါနီးကတည်းက ပိုက်ဆံ ယူပြီးတာ နည်းနည်းကြာနေပြီမို့ ပျက်တယ် ပြောရင် မပြင်ပေးတော့ဘူး ပျက်တာကို လုံးဝ လှည့်မကြည့်ပဲ ထားတာ ၂ပတ်ကျော် လောက်နေမှ ပြန်ကောင်းတတ်တယ်။ အိမ်ဖုန်းမဟုတ်တော့ပဲ ဆိုင်ဖုန်း ဖြစ်တော့.. ဒီလို အကြာကြီး ပျက်နေရင် ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ.. သို့သော်.. ဟန်းဖုန်းတွေ ရှိနေတော့ ၂ပတ်ကျော် ဖုန်းပျက်လည်း ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁လလောက် ဖုန်းကောင်းသွားလိုက်.. ဖုန်းပြန်ပျက်သွားလိုက် ၁လ ကျော် ကြာတဲ့ အထိ ဖုန်းက မကောင်းသေးဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်ထားမကောင်းတဲ့ လိုင်းမန်း ကို အဖက်လုပ်ပြီး မပြောချင်တော့ဘူး။ စိတ်ကုန်လာတဲ့ အတွက် ဆက်သွယ်ရေးက လူကြီး တယောက်ကို မေးပြီးတော့ အတိအလင်း ဖုန်းရဲ့ လိပ်စာ ကို ရွေ့လိုက်ပါတယ်။ အိမ်အတွက်လည်း ကြိုးဖုန်း အသစ်တလုံး ထပ် လျှောက်ပြီး တပ်လိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံ မရတဲ့ ဖုန်းလိုင်းကို မပြင်ပေးပဲ ထားလို့ ဖုန်းလိုင်း အသစ်တပ်မှန်း သိတော့ တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ နဲ့ အင်တာနက် သုံးမှန်း သိတဲ့ ဖုန်း လိုင်းကို ဖုန်းတိုင်မှာ ခလုပ်တခု ခံပေးထားလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ စတာပါပဲ.. လိုင်းမန်းက သူ့ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဖုန်း အသစ်လျှောက်ပြီး နှစ်စဉ်ကြေး မပေးတဲ့ လူတွေ အင်တာနက် မသုံးနဲ့.. တမင်ကို သုံးမရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းကတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ အင်တာနက် သုံးမရပါဘူး။ နေပြည်တော် ရုံး ၁၀၆ ကို ဆက်ပြီးတော့ ဖုန်းပျက်တိုင်လည်း အဆင်မပြေဘူး ဖုန်းလိုင်းသာ ကောင်းတယ် အင်တာနက်က ပျက်လိုက် လာလိုက် နဲ့ သုံးလို့ လုံးဝ မရပါဘူး။ တနေ့ကို ၁နာရီလောက်သာ သုံးလို့ ရတဲ့ အထိပါပဲ။ ပထမတော့ မသိတော့ ရတနာပုံတယ်လီပေါ့ ကို ဖုန်းဆက် မေးတယ်။ သူတို့က ထုံးစံ အတိုင်း တယ်လီဖုန်းလိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဘက်က မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို အဖြေတွေလည်း ရိုးအီစွာ ကြားခဲ့ရတယ်။ တကယ်လို့ လိုင်းစစ်ချင်ရင်တော့ ကွန်ပလိန်း ဖွင့်ပေးမယ်။ အဲဒါ စစ်ဆေးခ ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးရမယ် ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးပြီး စစ်ခိုင်းလည်း မရခဲ့ဘူး။ ထုံစံ အတိုင်း လိုင်းပျက်မြဲ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့ ၁လ လောက် ဆက်တိုင် ၁၀၆ ကို နေ့တိုင်း ဖုန်းဆက်ပြီး တိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမကောင်းသေးဘူး ဖုန်းမကောင်းသေးဘူး တိုင်ကြားတဲ့ အခါ လိုင်းမန်းက ရုံးကို မဆက်ပါနဲ့ ကျွန်တော် ဟန်းဖုန်းကို ဆက်ပါဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်ပေးသွားတယ်။ ပြင်ပေးမယ် စိတ်ချပါဆိုပြီး ပြင်ပေးပြီး တညနေတော့ အင်တာနက် ကောင်းသွားပါတယ်.. နောက်နေ့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ရိုးသားစွာ မကောင်းဘူး ထင်ထားခဲ့တယ်။ သူရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ အမ တို့ ဖုန်းလိုင်း တောက်လျှောက် စစ်ဆေးခဲ့တာ အမတို့ အိမ်နားမှ သိပ်မကောင်းတာ အဲဒီနေရာ ကြိုးလဲရင် ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ကျမလဲ ဆိုတော့ တွက်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ် ဆိုပြီး အရိပ်အခြေ လာမေးတဲ့ သဘောပါပဲ.. ကဲ.. ရက်ပေါင်းလည်း မနည်းဘူး လတွေနဲ့ ချီနေပြီမို့ ဒီတခါ သူလည်း ကျေနပ်အောင် တောင်းတာ ပေးလိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်နေ့ ကြိုးလဲခ ၄၅၀၀၀ကျပ် ကျပါတယ် အမ ဆိုပြိး လာတောင်းတယ်။ ကဲ သွားလေရော့.. နင်လည်း ဒါရမှ ကျေနပ်မယ်.. ငါလည်း စိတ်အပြတ်ပဲ.. ယူလိုက်တော့.. နောက်တခါ မကောင်းလို့ကတော့ ဒီတခါ တောင်းသွားတဲ့ ပိုက်ဆံ အတွက် လက်မှတ်ထိုးထားတာကိုပဲ ပြပြီး တိုင်တော့မယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ အင်တာနက်က ဖလမ်း ဖလမ်း ပြန်ထ လာပါတော့တယ်။
အင်တာနက် ကောင်းလာပေမဲ့ လူကတော့ ဖလမ်းဖလမ်း ထ လောက်အောင် မအားတော့ပါဘူး။
ဒီနှစ်ကုန်ရင်တော့ ဖုန်းလိုင်းကို အားကိုးပြီး အသုံးပြုရတဲ့ ADSL လိုင်းကို ဖြုတ်တော့မလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ တပ်ဆင်ထားတာ ကြာလှပြီမို့ ကနဦး တပ်ဆင်ခ အကြောင်း မပြောလိုတော့ပါဘူး.. 128M ကို လစဉ် ဒေါ်လာ ၃၀ နဲ့ နှစ်စဉ်ကြေး ၆၀ ပေးရပါတယ်။ မနေ့က MPT က ဈေးတွေ လျော့တယ် 512M ကိုတောင်မှ ၁၇၀၀၀ တဲ့.. ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကတော့ လျော့ဈေး ကိစ္စ မကြားသေးဘူးမို့ MPT က လျော့ချပေးတဲ့ ဈေးကို သရေကျယုံမှ တပါး အခြား မရှိတဲ့ အပြင် Plan ပြောင်းသုံးရင်လည်း ဖုန်းလိုင်းသမား ရဲ့ ယုတ်မာမှု ကို ထပ်ပြီး ကြုံရမှာမို့ ဒီလိုမျိုးတွေ မခံချင်တော့ပါဘူး။
ဖုန်းလိုင်းသမား မကောင်းတဲ့ အကြောင်း ဆက်လက်ပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင်..
အိမ်မှာ ဖုန်း ၂လုံး ရှိတာမို့… အရင်ကတည်းက ဖုန်းတလုံးကို ၂နှစ်တခါ ဖုန်းကြိုးမကောင်းလို့ လဲမှ ရမယ် ဆိုပြီး အလှည့်ကျ လဲခိုင်းတတ်ပါတယ်။ ဆူး တို့ အိမ်ယာဝင်းမှာ ရှိသမျှ အိမ်တွေ အကုန်လုံး ဒီတိုင်းပဲ ၂နှစ်တခါ ကြိုးအသစ် ကို လဲခိုင်းပြီး ပိုက်ဆံ တောင်းပါတယ်။ အားလုံးကတော့ ပေးလိုက်ရတယ် ဆိုပေမဲ့ စိတ်မရှုပ်ရရင် ပြီးရော ဆိုပြီး ပေးနေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် တအိမ်နဲ့ တအိမ် စကားမစပ်မိလို့ မပြောဖြစ်ပဲ ကိုယ့်အိမ်တင် ဖြစ်တာ ထင်ပြီး ပေးကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတိတ်ကိုလည်း မမြေမလှန်ချင်တော့ဘူး ပြီးတာလည်း ပြီးပါစေတော့.. ဖုန်းလိုင်းသမား အားကိုးရတဲ့ အဖြစ်ကိုလည်း မလုပ်ချင်တော့ဘူး.. အခုခေတ်မှာ ဖုန်းတွေ ဒီလောက် ဈေးပေါနေတာ တလုံးမှ ၂သိန်းခွဲပဲ ရှိတာ ဆိုတော့ ဖုန်းအပါ အပြီး ၃ခွဲလောက်ဆို ရနေပါပြီ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် မကြာခင် ဖုန်းကဒ်ဈေးတွေ ထပ်လျော့ပေးတော့မလားလို့..
အင်တာနက် ပိုက်ဆံ သွင်းထားတာကုန်ရင် နောက်နှစ်ဆန်းပိုင်းက စပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ စသုံးတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ တနေ့က သူများ ဖုန်းကို ယူပြိး အင်တာနက် လိုင်း ခဏယူသုံးမိတာ.. စိတ်ထဲမှာတော့ အဆင်မပြေဘူး အရမ်းကို နှေးကွေးနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူများ အားကိုးပြီး သူများ ယုတ်မာတာ ခံရနိုင်တဲ့ ဟာ ကို ဖက်တွယ်ပြီး မသုံးချင်တော့တာ အမှန်ပါပဲ.. ဟန်းဖုန်းနဲ့ သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ သုံးသလောက် ကုန်တာမို့.. ဘယ်လောက် နှုန်း သုံးလဲ ဆိုတာ သေချာတော့ မသိသေးဘူး… ဒီဟာ လွတ်ပြီး ဟိုဟာ ပြောင်းသုံးမှ စရိတ်တွေ မတရား တက်မှာလည်း တွေးမိသေးတယ်။
GSM, CDMA, WCDMAကနေ internet သုံးတာ နေရာတိုင်း မကောင်းဘူး။ တချို့ မြို့နယ် တွေ ဆို တော်တော်လေး ကောင်းပြီး တချို့ မြို့ နယ် တွေ ဆို webpage တခု ပေါ်ဖို့ တော်တော် လေး စောင့် ရတယ်။အဆင်ပြေပါတယ် ဆိုတဲ့ မြို့နယ်တောင် ADSL ကို မမီဘူး။ တတ်နိုင်ရင်တော့ ရှိရင်းစွဲ ADSL ကို သုံး ပေါ့။ ဈေးလျော့တာမှန်ရင် တော့ ကနဦး တပ်ဆင်ခ ကို ပြင် လို့ မရတော့ ပေမဲ့ လစဉ်ကြေး နှစ်စဉ်ကြေး တွေ တော့ သက်သာကောင်းပါရဲ့။
MPT ပြောင်းယူပြီးလည်း ဖုန်း လိုင်းသမားက ညစ်မှာ စိုးလို့.. စိတ်နည်းနည်း ပျက်နေတာ.. နောက်ပိုင်း အင်တာနက် သုံးခ ပါ ထပ်လျော့ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်နော်..
ပြင်ပြီးရင်ညာရမှာ ပျက်တွယ်ရေးရဲ့ပညာလေ ပျက်အစဉ်ပြင်ခဏခဏတဲ့
တစ်ခါစားမလုပ်ဘူးလေ ခဏခဏစားရအောင်ပဲလုပ်တာ မြန်မာ့ပျက်တွက်
အောင်မြလေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး တရဲဗျို………………တရဲ တရဲ…………………………….
စိတ်လျော့ထားပါတယ်.. အင်တာနက် ပျက်တာ တော်တော် ကြာသွားတာ.. အရင်းအမြစ် ကို သိအောင် လာဖွ.. အဲ ပြောပြတာ.. အဟိ
ကြိုးဖုန်းရှိသူ အားလုံးနီးပါး ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေထဲက အချက်တွေပါ၊ ကျန်ပါသေးတယ်။
အဲဒီ ဒုက္ခတွေ အပြင် ဆက်သွယ်ရေးက လူလည်ကျတာတွေ ဖြစ်တဲ့…
ငါးထောင်တောင် မယူသင့်တဲ့ ဖုန်းကဒ်ကို ၂သိန်းနဲ့ ရောင်းတယ်။ ဈေး မလျော့လို့ မဖြစ်တော့တာတောင် ကြံရည်ကြိတ်သလို ရသလောက် ညှစ်ယူနေသေးတယ်။
ဖုန်းဘီလ် တွေကောက်တာ ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူး။ ကျသလောက်ရှင်း တောင်းသလောက်ပေး ပုံစံမျိုး၊ မှန်သလား မမှန်လား စစ်ဖို့ လွယ်အောင် လုပ်မပေးဘူး။
ဖုန်း ဆက်တာကို ခိုးနားထောင်တယ်။ အသံဖမ်းတယ်။
အင်တာနက်ကို subcontract ဆပ်ကန်ထရိုက်တွေ ခွဲပေးထားပြီး လိုင်းကောင်းအောင် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။
ဆက်သွယ်ရေး ဘက်က အမှားအယွင်းကြောင့် သုံးစွဲသူတွေ နစ်နာရင်၊ အသိပေးတာတွေ တောင်းပန်တာတွေ လုပ်ရကောင်းမှန်း မသိဘူး။
နိုင်ငံတကာမှာ တရားဝင်ဖြစ်တဲ့ VoIP တွေ (Viber, Tango) သုံး ရင် လိုင်းဖြတ်ခံရမယ်လို့ ပြောတာတွေ။
ဒါတွေအားလုံးအတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသူကတော့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းပါ။ ဝန်ကြီးက ပြည်သူတွေ အပေါ် စေတနာရှိပါတယ် လို့ပြောတာဖတ်ဖူးတယ်။ ကျနော်တို့ ဖုန်းမှာ ကလင်…ကလင် မြည်ရင်၊ သူတို့ အိတ်ထဲမှာ ချလွင်…ချလွင် မြည်တယ်တဲ့။ ဆက်သွယ်ရေးက လူတွေ ပိုက်ဆံတွေ မအားအောင် သိမ်းနေရလို့ ကျန်တာဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ ကျနော်တို့ ဒုက္ခ တွေကို ဝန်ကြီးသိအောင် လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်…
ဆူး ကို အကြံပေးရရင်… လက်ရှိ ADSL ကအဆင်မပြေဖြစ်ရတာ ဝန်ထမ်းကြောင့် ဖြစ်ရတာဆိုတော့… အဲဒါကိုပဲ ပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဖုန်းပျက်တဲ့ အချိန်၊ နေ့ရက်၊ ပေးရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ရေးမှတ်ထားပြီး တိုင်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာ နားလည်မှု့နဲ့ လက်ဘက်ရည်ဖိုးပေး တာကိုတော့ တိုင်လို့မရဘူးပေါ့။ ဟန်းဖုန်း နဲ့သုံးတာ ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသွားလိမ့်မယ်… ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့ loading ကိုစောင့်နေတဲ့ အတွက်လည်း ပိုက်ဆံပေးနေရတယ်။ ဟန်းဖုန်းက သွားလာရင်း လမ်းပေါ်မှာ လည်းသုံးလို့ရတာ တစ်ခုပဲ ကောင်းကွက်ရှိတယ်… CJ တွေအတွက်ပေါ့။ ဆူး က ဆိုင်မှာပဲ ထိုင်သုံးမှာ ဆိုတော့ mobile network ဖြစ်စရာမလိုဘူး။
အကြံပြုတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
adsl လိုင်းဘာလို့ ပျက်
VIP မဟုတ်လို့ ပျက်
တနှစ် တနှစ်ကို ဖုန်းလိုင်းသမား အတွက် သိန်းဂဏန်းပေးတာထားမို့.. တခြား ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် ထပ်မပေးချင်တော့တာ အမှန်ပါပဲ.. ဒီရပ်ကွက် ဖုန်းလိုင်းသမားတွေက အချီကြီး မရရင် စိတ်မ၀င်စားချင်တော့ဘူး.. အဲလို ဖြစ်နေတာ.. အင်တာနက်ကလည်း မသုံးရရင် ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။း( ဒါလည်း ရောဂါ တမျိုးပဲ.. စိတ်ပျက်တယ်။
ကိုပေါက်ဓတ်ပုံတွေဆို မြင်ရတလှည့် မမြင်ရတလှည့် 
ညနက်မှ လိုင်းပေါ်တက်လို့ရတယ် ..။
ရတနာပုံမှာ ၁နှစ်စာ သွင်းထားတာ ၃လ ပိုင်းလောက်မှ ကုန်မှာ ဆိုတော့ MPT လျော့နေပြီ ဆိုတော့ ရတနာပုံကလည်း လျော့ချင် လျော့မလား မသိဘူး စောင့်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။ ရတနာပုံ မလျော့ပေးရင် ဆန္ဒ ထွက်ပြကြမယ်.. ဟိဟိ..
ဖုန်းလိုင်းမန်းတွေကတော့ လူယုတ်လူညစ်တွေချည်းဘဲ။အင်တာနက်သုံးတဲ့ဆိုင်ဆိုပိုလုပ်တယ် ပိုဖြတ်တယ်။အဲ့လိုပြတ်သွားရင် သူတို့လာလုပ်ပေးရင် အနည်းလေး ၃၀၀၀ လောက်ပေးရတယ် နေပြည်တော်
၁၀၆ကိုတိုင်ရင်တော့သူတို့ကြောက်တယ်။နောက်ကိုယ်သုံးတဲ့ ဖုန်း အိပ်ချိန်းရုံးကိုလည်းသွားပြီးပိုက်ဆံပေးပြီး
စစ်ရတယ် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ port ကမကောင်းရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ် ဖုန်းနဲ့ မိုဒမ်းကိုခွဲတဲ့ spliter မကောင်း
ရင်လည်းဖုန်းလိုင်းကောင်းပေမဲ့ အင်တာနက်မကောင်းဘူး။မိုဒမ်းကဘာအမျိုးအစားလည်း အစိုးရကပေးတဲ့
မိုဒမ်းတွေဆို လုံးဝမကောင်းဘူး မီးအားအတက်အကျရှိတာနဲ့ လိုင်းကျတယ်။မိုးဒမ်းကိုသေချာစစ်ပြီးပြောင်းသုံး
ဖုန်းလိုင်းသမားတွေ ညစ်နေတာ လူတွေ သိသိကြီးနဲ့ ခံနေကြတာတွေကိုတော့ နည်းနည်း ပြောကြ ဆိုကြပြီး ပြုပြင်တဲ့ ဘက်ကို ရောက်လာအောင် လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။
နေရာတိုင်းမှာတော့ လူညစ်က ရှိနေအုန်းမှာ ဆိုတော့.. ညစ်တဲ့ လူကတော့ ရရင် ရသလို ကပ်ပြီး နေအုန်းမှာပဲ..
ရတနာပုံတယ်လီပေါ့ ကို ဖုန်းဆက်ရင် call center ၁၈၇၆ က ဖြေရှင်းပေးမယ် ဆိုပြီး အတင်းကို အဲဒီ နေရာဆက်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီက လူတွေက စိတ်မရှည်သလို နည်းပညာ အကြောင်းလည်း နားမလည်ဘူး။ ထုံစံ အတိုင်း ဖုန်းဆက်မေးရင် modern ပူနေလို့ ဖြစ်မယ် ၁၅မိနစ် ပိတ်ထားပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောပြီး ဖုန်းချ ပလိုက်ကြတယ်။ မကောင်းဘူး ပျက်တယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ကွန်ပလိန်းဖွင့်ပေးမယ် ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးရမယ် ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။
အရင် ၄၄၂၁၁၁၁ ကို ဆက်ရင် တခါမှ ကွန်ပလိန်းဖွင့်ရင် ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးရတယ် မပြောဘူးဘူး။
ပေးလည်း မပေးရဘူး။ call center ကလည်း ကိုယ်မပိုင်တဲ့ အပိုင်းကို အတင်းယူချင်လို့ လုယူထားတာနဲ့ တူပါတယ်။ အသုံးမကျတဲ့ လူတွေ ပြောပြီး ငွေညှစ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။
ဖုန်းသမားကလည်း ညစ်ချင်လို့ တမင် ကို အင်တာနက်မရပဲ ဖုန်းပဲ ရအောင် လုပ်ထားတာလည်း ရှိနေတယ်။
သူငယ်ချင်း ရုံးမှာ ဆိုရင် မသင်္ကာလို့ တိုင်ပေါ်တက်ကြည့်တာ ခလုပ်တွေ့လို့ စမ်းကြည့်လိုက်တော့မှ အင်တာနက်ပျက်အောင် တမင် လုပ်ထားမှန်း သိတယ်။ အဲဒါကို တိုင်လိုက်တော့ အဲလူ ပြုတ်ပေမဲ့ နောက်လူ က တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသမား.. ၁လ ၁သိန်း ဖုန်း အလုံးပေါင်း ၁၀လုံးလောက် နဲ့ တွက်ပြီး ပုံမှန် ဆက်ကြေးပေးရပါတယ်တဲ့ကွယ်။
အားလုံးတော်တန်တိတ်... သဂျီးသမက် ကိုရင်ကြောင်ကြီး says:
ခက်တယ်ဗျာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုလ်တုထောင်ပြီး အင်တာနက်သုံးကြည့်ပါလား။ ဒါဆို ဘယ်ကောင်မှ ကြောက်စရာ မလိုဘူး။ သဂျီးပြောလည်း ပြောချင်စရာပဲ.. ပြည်တွင်းကလူတွေ အတွေးအခေါ် ကွန်ဆာဗေးတစ်ကျလွန်းပုံများ…။ ကဲ ပြောနေကြာတယ် သဂျီးနဲ့ ကဗုံးကြော်… ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်သွားပြီး ငတုံးတွေကို ခေတ်မှီပညာတွေ သင်ပေးလိုက်ရအောင်…
ရဲဘော် ကြောင်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ရာထူးတွေ ဘာတွေ တက်သွားရတာလဲ.. အားလုံးတော်တန်တိတ်.. မိုဟာမက် ကိုရင်ကြောင်ကြီး တောင် ဖြစ်သွားပါကောလား.. မိုးပြာ ကို စွန့်လွတ်လိုက်ပြီလား။
ရဟီးဆပ် မားသလူး မဟာချန်ဒရာစူလိယ ရဋ္ဌဂုရုဆာမိ says:
ကျုပ်လည်း နှစ်ရက်တော့ ထိန်းထားသေးတာပဲ ခုတော့ 
တော်တော်ဆိုးတဲ့  မိဂီ အဲသူ့ ကြောင့် 
အာတာပူတီ ချာပါတီ ဂျလေဘီ ဇတ်ဆရာ ပြသနာ ရေသည် ဆာမိ ပိုစ်ထဲမှာ ပါသွားပြီး နာမည်ပေးထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဟာလေးတွေ ပြန်ပြောပြတာ..
လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ တို့ရန်သူ
ပေးသူ ယူသူ အပြစ်ရှိတယ်တဲ့နော်… အန်တီဆူး
၀န်ထမ်းတွေထဲမှာ အဆင်မပြေလို့ လုပ်တာရှိသလို.. ရလို့ လုပ်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်.. မပြောလိုတော့ပါ..
လိုင်းသမား ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ စဉ်းစားကြည့်မယ်..
ကြွေးမကျေ၊ ငွေမသွင်းတဲ့လိုင်းကို အိတ်ချိန်းက main distribution frame မှာ port ကို အဝါရောင် ကော်ကလစ်လေးတွေ ထိုးလိုက်ပြီး လိုင်းဖြတ်ထားလို့ရပါတယ်..
ဖုန်းလိုင်းသမားတွေက (သူ မကြည်တဲ့လိုင်း) ဖုန်းပြောမရအောင် လုပ်ချင်ရင် ဘာကြိုးမှ ဖြုတ်မနေရဘူး အဲဒီကလစ်လေး ကောက်ထိုးထားယုံဘဲ. ဟဲဟဲ သူတို့တောင်းတာ ရရင် ဖြုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့..
ADSL မှာတော့ လိုင်းသမားလုပ်တာရှိသလို၊ တခြား fault တွေလည်းရှိတတ်တယ်။ တကယ်လို့ ဖုန်းလိုင်းက earth ကျတယ်(ကြိုးပေါက်ပြီး ပြင်ပအရာတွေနဲ့ ထိသွားတာ.လိုင်းလျှော့ဆိုပါတော့) ဆိုရင် voice ရ (ဖုန်းပြောနိုင်) ပေမယ့် data မရ (အင်တာနက် သုံးမရ) ဖြစ်တတ်တယ်။
မဆူးပြောသလို ADSL ကိစ္စ လိုင်းသမားနဲ့တင် ငွေပေးရင်ကောင်း ကျန်တဲ့အချိန်မကောင်းဖြစ်တာဆို အဲဒီအချက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ မဆူးရဲ့ ဖုန်းလိုင်းကို ဖောက်ထားပြီး လျှော့တိုက်ထားလိုက်မယ် ဖုန်းပဲပြောရပြီး အင်တာနက် သုံးမရအောင်လုပ်လို့ရတယ်.. သုံးစရာ ပြတ်လိုက် လျှော့တိုက်လိုက် သုံးစရာ ပြတ်လိုက် လျှော့တိုက်လိုက် ဟိဟိ အဆင်ပြေတာ.. အာရကေလေး ရတော့ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေမှာပဲ…
ဒီတော့လည်း ပုံပြင်လေးက ဒီမျှပါပဲကွယ်.. အဲလို ဖြစ်နေတာပေါ့
လာဘ်ပေး ရန်မလို ပါကွယ်.. ဒို့ရန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။